Sabiha Gökçenအတွက်တင်မည့်နေရာ RayHaber | မီးရထားလမ်း အဝေးပြေး | ကေဘယ်လ်ကား
ပင်မစာမျက်နှာတူရကီMarmara ဒေသကြီး41 KocaeliSabiha Gökçen'e Kocaelikart Loading Point
09 / 11 / 2019 Levent Elmastaş 41 Kocaeli, အထွေထွေ, လေဆိပ်, လမ်းမကြီး, ဘီးစနစ်များ, ခေါင်းစီးသတင်း, Marmara ဒေသကြီး, တူရကီ 0
Sabiha Gökçen'e Kocaelikart Loading Point; Kocaeli မြို့တော်စည်ပင်သာယာ၊ TransportationPark ၏တွဲဖက်များထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည် A.Ş. နိုင်ငံသားများ Sabiha Gokcen လေဆိပ်တင်ပို့သည့်စနစ်သည်နိုင်ငံသားများ၏ ၀ ယ်လိုအားနှင့်အညီခရီးသည်များကိုတင်ဆောင်ခဲ့သည်။ ကြာသပတေးနေ့မှ စတင်၍ ၀ န်ဆောင်မှုပေးသော7Kocaelikart တင်သည့်နေရာသည်နိုင်ငံသားများ၏အမှတ်အသားအပြည့်အစုံကိုရရှိခဲ့သည်။
နိုင်ငံသားများသည် Metropolitan မြူနီစီပယ်ကနေသတင်းကိုလာ၏။ ခရီးသည်များ၏အလွန်တရာလိုအပ်ချက်များနှင့်အညီ, Kocaelikart ၏ installation system ကို Sabiha Gökçenလေဆိပ်တွင်တပ်ဆင်ခဲ့သည်။ လေဆိပ်မှ Kocaeli သို့လာချင်သောနိုင်ငံသားများအားအဆင်ပြေစေမည့်စနစ်နှင့်အညီခရီးသည်များသည် TL သို့ Kocaelikarts သို့လက်မှတ်အရောင်းဌာနမှတင်ဆောင်နိုင်သည်။
7 နိုဝင်ဘာကြာသပတေးနေ့မှ စ၍ Kocaelikart မှအချက်အလက်များဖြည့်သည့် 250 နှင့် 250G သည်လေဆိပ်ဘတ်စ်ကားပေါ်သို့ခရီးသည်များအတွက်အဆင်ပြေစေမည်။ နိုင်ငံသားများသည်လက်မှတ်အရောင်းဌာနမှလေဆိပ်သို့အလွယ်တကူ download နိုင်သည်။ Kocaelikarts မရှိလျှင်ခရီးသည်များသည်တစ်ကြိမ်တည်းသုံးလက်မှတ်များ ၀ ယ်နိုင်သည်။
ခရီးသည်များ၏တပ်ဆင်မှုကိုသဘောပေါက်လာသည်နှင့်အညီသူတို့ဟာအလွန်ကျေနပ်မိပါတယ်၊ အဲဒီလိုစနစ်တစ်ခုကိုတည်ထောင်ဖို့တောင်းဆိုခဲ့ကြပြီးစနစ်ရဲ့တောင်းဆိုချက်ကိုပေးပို့ခဲ့တဲ့စနစ်ဟာ Kocaeli Metropolitan Municipality ကိုထုတ်ဖော်ပြသတာကိုလျစ်လျူရှုမထားပါဘူး။
Sabiha Gokcen အသစ်သောလိုင်းများအနေဖြင့် Gebze; 250G 21 / 09 / 2017 Kocaeli Metropolitan မြူနီစီပယ်၏ TransportationPark သည် Gebze နှင့် Sabiha Gökçenလေဆိပ်အကြား 250G လိုင်းစတင်သည်။ သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးပန်းခြံနှင့်ဆက်သွယ်မည့် 250G လိုင်းသည် Gebze Bus Station နှင့် Sabiha Gökçenလေဆိပ်အကြားအောက်တိုဘာတနင်္လာနေ့တွင်တည်ရှိသည်။
Sabiha Gokcen အဆင်ပြေခရီးသွားကာလ 21 / 10 / 2017 Kocaeli Metropolitan Municipality မှ Sabiha Gökçenလေဆိပ်သို့ခရီးသည်ပို့ဆောင်သောလိုင်းကိုသက်တောင့်သက်သာဇိမ်ခံခရီးသည်တင်ဘတ်စ်ကားများဖြင့်အစားထိုးခဲ့သည်။ Yasin Özlü, Park AŞ၏အထွေထွေမန်နေဂျာ
အစ္စတန်ဘူလ်မြေအောက်ရထား Sabiha Gokcen မှတိုးချဲ့ပါလိမ့်မယ် 19 / 08 / 2014 အစ္စတန်ဘူလ်၏မက်ထရိုမီတာသည် Sabiha Gökçenအထိတိုးချဲ့မည် - အစ္စတန်ဘူလ်ရှိမက်ထရိုမီတာသည်Kaynaşlıမှ Sabiha Gökçenလေဆိပ်သို့တိုးချဲ့မည်။ 25 လိုင်းအသစ်အတွက်တင်ဒါသည်စက်တင်ဘာလတွင်ဖြစ်သည်။ ပို့ဆောင်ရေး ၀ န်ကြီးဌာန၊ ရေကြောင်းနှင့်ဆက်သွယ်ရေး ၀ န်ကြီးဌာန၊ Sabiha Gökçenအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလေဆိပ်မက်ထရို
Line 200 ကိုသုံးသောသူတို့အား ospel ၀ ံဂေလိတရားကို .. ! အစ္စတန်ဘူလ်များအတွက် Kocaelikart စက်ပစ္စည်း 05 / 11 / 2019 Line 200 ကိုသုံးသောသူတို့အား ospel ၀ ံဂေလိတရားကို .. ! အစ္စတန်ဘူလ်အတွက် Kocaelikart စက်ပစ္စည်း; Kocaeli Metropolitan မြူနီစီပယ်နိုင်ငံသားများအနေဖြင့် Istanbul Kartal (IETT platform )ရိယာ) Kocaelikart ၏ခရိုင်ကို ၀ န်ဆောင်မှုပေးရန်ကမ်းလှမ်းသည့်ပစ္စည်းကိုလျစ်လျူမရှုရန်တောင်းဆိုမှုများအားဖြင့်ဖြစ်သည်။ အစ္စတန်ဘူလ်မှ Kocaeli သို့…
Yavuz Sultan Selim တံတားအများစုမှာ 12 / 08 / 2016 Yavuz Sultan Selim တံတား: Istanbul's3Bosphorus တံတား Yavuz Sultan Selim တံတား 26 ကိုသြဂုတ်လတွင်ဖွင့်လှစ်လိမ့်မည်။ အဖွင့်မတိုင်မီရက်အနည်းငယ်ကbridgeရာမတံတား၏အင်္ဂါရပ်များ ...3သည် Bosphorus ၏နှစ်ဖက်စလုံးကိုဆက်သွယ်ခြင်း။
Sabiha Gokcen အသစ်သောလိုင်းများအနေဖြင့် Gebze; 250G
Sabiha Gokcen အဆင်ပြေခရီးသွားကာလ
အစ္စတန်ဘူလ်မြေအောက်ရထား Sabiha Gokcen မှတိုးချဲ့ပါလိမ့်မယ်
Line 200 ကိုသုံးသောသူတို့အား ospel ၀ ံဂေလိတရားကို .. ! အစ္စတန်ဘူလ်များအတွက် Kocaelikart စက်ပစ္စည်း
Yavuz Sultan Selim တံတားအများစုမှာ
ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးသတိပြုပါ: Sincan Sincan xnumx.adet ကွန်ကရစ် trauma're တင်, ချခြင်းနှင့် stacking အလုပ်အကိုင်အနူးညံ့အကြား
ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးသတိပြုပါ: စုစုပေါင်းကုန်တင်ကိုင်တွယ်ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးစင်တာ7မှKöseköyလမ်းhörtuvနူးညံ့ရွေ့လျားအလုပ်လုပ်တည်ဆောက်
ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးသတိပြုပါ: တင်အတွက်ကွန်ကရစ်ပာ '' ၏ 3.050 အပိုင်းပိုင်း, ချခြင်းနှင့်ပြောင်းလဲန်ဆောင်မှုစီးပွားရေးလုပ်ငန်းဝယ်ယူမှုနူးညံ့ဝယ်ယူ